नराम्रो सपना देख्नुभयो ? चिन्तित नहुनुहोस् यी उपाय गर्नुहोस् नष्ट भएर जान्छ नराम्रो सपना ! | Rochak
September 23, 2021 NepstokLeaveaComment on नराम्रो सपना देख्नुभयो ? चिन्तित नहुनुहोस् यी उपाय गर्नुहोस् नष्ट भएर जान्छ नराम्रो सपना !
सबै मानिसहरूको लागी प्रिय चिज भनेकै निन्द्रा हो l दिनभरिको थकाई मेट्न वा आराम गर्नका लागि मानिसहरू सुत्ने गर्छन् ।जसले गर्दा मानिसहरूले आराम भएको महसुस गर्ने गर्छन् । तर कहिले काहीँ नराम्रो सपना देखेर मानिसहरू झस्कने गर्छौँ । जसले गर्दा उनीहरूको निन्द्रा भागेर जान्छ त्यसैले जब तपाईँ नराम्रो सपना देख्नु हुन्छ तब अपनाउने गर्नुहोस् यी उपाय जसले नराम्रो सपना देख्नबाट छुटकारा दिलाउँदछ ।
यदि तपाईँले खराब सपना देख्न भएको छ भने यी मन्त्रलाई करिब दस पटक भन्नुहोस् l जसले गर्दा फेरी पनि नराम्रो सपना देखिँदैन ॐ हीं त्रीं पूर्व दुर्गतिनाशिन्यैमहामायायै स्वाहा अत्यन्तै अशुभ सपना देखे निम्न श्लोक तीन पटक वा यथाशक्य जप गरे खराब सपनाको फल नष्ट हुन्छ विष्णु नारायणं कृष्णं: माधवं मधुसुदनमं हरि नरहरि राम गोविन्द दधिवामनमं ।यदि तपाईँ नराम्रो सपना देखेर उठ्नु हुन्छ र फेरी सुत्नु भयो भने पनि सो सपनाको कुनै अस्तित्व रहदैन् खराब सपना नष्ट भएर जाने गर्छ ।
आज हामीले यस्ता केही पाँच वटा सपनाको बारेमा उल्लेख गरेका छौं जुन सपना अन्य व्यक्तिहरुलाई सुनाएको खण्डमा तपाईको जीवनमा यसबाट हुने प्रभाव कम हुँदै जाने गर्दछ । १. आफूलाई मृत अवस्थामा देख्नु भएमा: यदि तपाईले निन्द्राको समयमा आफुलाई मृत अवस्थामा देख्नुभयो भने यो सपना अन्यन्त शुभ हुने गर्छ। यस सपनाको अर्थ तपाईका जीवनमा आइपरेका हरेक समस्याहरुको अन्त्य हुँदै जानेछन् भनेर बुझिन्छ। त्यसैले यस्तो सपना देख्नुभएमा कसैलाई पनि सुनाउनु हुँदैन ।
साँप देख्नु भएमा : यदि राती सुतेको समयमा सपनामा साँप देख्नु अन्यन्तै शुभ मान्ने गरिन्छ। यदि तपाईलाई साँपले लखेटेको ,घेरेको वा टोकेको देख्नु भएमा यो जान्नुहोस् कि तपाईको जीवनमा ठूलो मान-सम्मान, धन प्राप्त गर्नुका साथै तपाईका हरेक कदम प्रगति उन्मुख हुनेछन्। यदि तपाईंले आफ्नो सपनामा सर्प देख्नुभयो भने, तपाईंले चाँडै सफलता र पैसा पाउँदै हुनुहुन्छ ।
तपाईले थालेको काममा तपाई सफलताको नजिक हुनुहुन्छ । त्यसैले यस्तो सपना कसैलाई नभन्नुहोला । हराभरा बगैंचा र रुखमा फल लागेको देखेमा : यदि सपनामा तपाईको घर वरिपरि वा सुन्दर बगैंचा साथै कुनै रुखमा फल लागेको देख्नु भयो भने त्यसलाई निकै शुभ मान्ने गरिन्छ। यस्तो सपना देख्नुको अर्थ तपाईले जीवनमा चाहे जति खुशी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने आउने दिनहरुमा तपाई आर्थिक रुपले सम्पन्न हुने योग रहने छ।सानो माछा देख्नु भएमा : माछालाई देवताको प्रतिक पनि मान्ने गरिन्छ। यदि सपनामा तपाइले सानो माछा पकाएको अथवा खाएको देख्नुभयो भने यसको मतलब तपाईलाई जीवनमा आकस्मिक धन लाभ हुने योग रहेको छ भने यसका साथै सुख प्राप्ति पनि हुने गर्छ।
बलिरहेको दियोको साथमा भगवान प्रकट भएको देख्नु : यदि तपाइले सपनामा भगवान देख्नुभयो भने अथवा बलेको दियो देख्नुभयो भने यो तपाइको लागी धेरै शुभ हुने गर्छ। यसरी सपनामा बलिरहेको दियो देख्दा यसले तपाईको जीवनमा नँया-नँया किसिमका अवसरहरु प्राप्त हुँदै जाने संकेत दिन्छ ।
यसको साथमा तपाइले कुनै देवि देवता प्रकट भएको देख्नुभयो भने पनि तपाईको जीवनमा निकै ठूलो सफलता मिल्नुको साथै यसले सदैव तपाइको जीवनमा खुशीयाली छाउन सक्छ। त्यसैले यी सपनाहरु तपाइले कसैलाई नभनेको नै राम्रो हुन्छ । यस्तो सपना अरुलाई भन्दा यसको प्रभाव कम हुँदै जाने विश्वास गरिन्छ ।